Ibandla lithokozise izintandane | News24
Ibandla lithokozise izintandane
Isithombe: Makhosandile ZULU Abantwana namalungu ebandla i-Apostolic Faith Mission, enkundleni yezemidlalo eThembeni, lapho bekujatshuliswa izingane zase Nokukhanya Luthuli Childrenand#039;s Home ngeledlule
IBANDLA laseThembeni i-Apostolic Faith Mission Hope Restoration Worship, libe nomcimbi wokujabulisa abantwana abayizintandane base-Nokukhanya Luthuli Children’s Home, ngoMhla ka-6 kuNhlangulana (June).
Lo mcimbi, obuhambisana nomkhankaso wokugqugquzela ukuvikelwa kwabantwana, phecelezi i-Child Protection Week, ubuse nkundleni yezemidlalo eThembeni.
UMama webandla, uMfu Nokubonga Sithole uthe, njenge bandla bakubona kubalulekile ukusebenzisana nekhaya lezi ntandane i-Nokukhanya Luthuli Children’s Home ukuze bezovuselela ithemba nokholo ezinganeni ezingenabo abazali nezihlobo.
Uthe: “Usuku lwanamhlanje lubalulekile ngoba sifuna ukujabulisa abantwana abayizintandane, nabanye abaphuma emakhaya lapho khona isimo sezimali singesihle. Inhloso yethu ukuthi sifuna labantwana bezizwe beyingxenye yomphakathi, futhi bazi ukuthi bengamalungu omndeni webandla lethu,” kusho yena.
Izingane zijabuliswe ngezindlela ezahlukahlukene, kubalwa umncintiswano kanobuhle, imijaho eyahlukahlukene, beqhudelana ngokungena emasakeni, begijima namaqanda bewebambe ngezipuni, bekukhona nomncintiswano wokudansa nokucula, kukhona ne-jumping castle.
Emva komncintiswano abantwana banikezwe izindondo namathoyizi ukubabonga ngokwenza kahle emidlalweni.
Owesifazane osebenzela leli khaya lezi ntandane, uNksz Hlengiwe Nkabinde uthe: “Siyazibongela izingane ngalolu suku njengoba zijabule kakhulu. Siyalubonga nebandla ngalokhu elikwenzile ngoba laba bantwana esihlala nabo abanamuntu obenzela izinto ezinjena, yingakho kusijabulisa nathi ngoba siyazi ukuthi nazo izingane zijabule kakhulu,” kusho uNksz Nkabinde.
UMfu Dumisani Sithole waleli bandla uthe: “Siyafisa futhi siyacela ukuthi umphakathi uxhase ibandla, njengoba sifisa ukuba nendlu yethu esingakhonzela kuyo,” kusho uMfu Sithole.
Uqhube wathi kubalulekile ukuthi ibandla libe nendlu yalo yokukhonzela, ukuze bazokwazi ukuqhubeka nokufeza zonke izinhlelo ezisiza umphakathi. UMfu Sithole ubonge bonke abanikele ngemali nangesikhathi sabo ukuqinisekisa ukuthu lolu suku lube yimpumelelo. Ubonge isitolo uBoxer ngokunikela ngokudla. Uthe: “Asiqali ukusebenzisana naleli khaya lezi ntandane, sijwayele ukuhambisa ukudla, kanti uma sihambisa ukudla sisuke sixhaswe abakwa-Food Bank South Africa noMfu Emmanuel webandla lama-Philadelphia, eStanger Manor,” kusho yena.
Uma kukhona onesifiso sokuxhasa leli bandla engaxhumana noMfundisi Sithole enombolweni ethi: 082 687 4628.